Umthandazo ngaphambi kokulala isikhathi kunezakhiwo eziyisimangaliso. Okokuqala, amazwi akhe omlingo asendulo akwazi ukuvikela emandleni amabi - kokubili umntwana nomdala. Okwesibili, umthandazo ovela enhliziyweni ehlanzekile ngaphambi kokulala usiza ukuthola ukuthula kwengqondo, ukuqeda ukukhathazeka, kubangela ukuphumula nokulala okujulile. Okwesithathu, umthandazo, okuyinto empeleni, ingxoxo noNkulunkulu, unamathuba angenamkhawulo ngempela. Kungashintsha impilo yakho ibe ngcono, iqinise impilo, ubuyisele ukuvumelana nezwe.
Ukulala, njengoba wazi - umphulukisi umhlabeleli wezempilo ngokomzimba nangokwengqondo. Kodwa uma noma iyiphi inqubo engathandeki kwengqondo-engokomzwelo ingaphumeleli emphefumulweni, izinsolo zingahle ziphume ebusuku, futhi lokhu kulala ngeke kuhambisane nokuphila okusalayo ekuseni. Uzozizwa ukhathele futhi ukhathele, njengokungathi usebenze ubusuku bonke. Futhi uma ungakaze uthandazele ubusuku obuphambili, zama. Uzobona ukuthi umthandazo ngaphambi kokulala kanjani, njengengxoxo enokuthula noMdali, usebenza ngokuthula kakhulu esimweni sengqondo.
Amazwi omthandazo awabalulekile, njengoba kufanele avele enhliziyweni ehlanzekile. Phela, kungunembeza - lokhu, ngezinye izikhathi, isivakashi esingamukelwa, singaphazamisa ukulala njalo. Yenza imisebenzi emihle, gcina imiyalo - futhi uzolala ngokuthula. Kwakungekho ngaphandle kwesizathu ukuthi inkulumo ethi "iphupho labalungileyo" yavuka. Iphupho lomuntu onenhliziyo ehlanzekile, imicabango yakhe, izifiso zakhe nezenzo zilula futhi zilungile. Kufanele kukhunjulwe ukuthi uNkulunkulu uzokuzwa imithandazo yakho futhi njalo uzovuma ukuphenduka kwakho uma kuqotho.
Ukuze ulale ngokuzamile nangokuqinile, awukwazi ukugcina intukuthelo enhliziyweni. Kubalulekile ukuthethelela bonke abantu abakake bakuncelise. Ukuthethelela - akusho ukuthi empilweni yangempela udinga ukulinda ngezingalo ezivulekile. Kusho ukuthi umphefumulo wakho awunayo inzondo noma yimuphi omunye umzwelo omubi. Ukuzonda enhliziyweni kuletha ukuhlushwa okungenakubekezela. Futhi ngeke alale kahle ngokuqinisekile. Futhi ngisho nomthandazo ngaphambi kokulala angakwazi ukusiza. Ngakho-ke, khulula zonke izicelo zakho kuNkulunkulu, ezweni elikuzungezile nakubantu. Qonda lokho kuzo zonke intando yoMdali. Umhlaba wezinto ezibonakalayo uyinkolelo, futhi uthando kuphela luyiqiniso futhi liyiqiniso kuphela. Ngakho-ke, umthandazo wokulala kufanele uqale ngokubonakaliswa kothando ngoNkulunkulu. Qonda ukuthi uyindalo engcono kakhulu kaNkulunkulu futhi uzizwa ukuthi uyamthwala enhliziyweni yakho. Londoloza isithombe sikaNkulunkulu emicabangweni nasezifisweni zakho. Vumela ubumnene nobuhle bakhombise izenzo zakho.
Emthandazweni ngaphambi kokulala, ungaphendukela kuNkulunkulu ngamazwi:
"Ungangithukutheli futhi ungakhumbuli ukungalungi kwami. Bukela amehlo ami kunesihe sami, ungisindise ezitheni zami. Ngingumsebenzi wemisebenzi yezandla zakho, ngibiza igama lakho. Ngikhulule ebubini futhi uvikele umphefumulo wami. Nginike, Nkosi, ukuchitha ubusuku obuhle. Ngikhulule emicabangweni engenangqondo nangezinkanuko zababi abangikhohlisayo. Vumela ukukhanya kwakho kuhlale kungcolile. Vumela umzimba wami ukuba ukhululekile esonweni, futhi ukuhlanzeka kwemfundiso yakho kuyoqhubeka nokuthobeka enhliziyweni yami. "
Ulale, ungakhathazeki ngekusasa. Ikusasa lihlakaniphile njalo kunobusuku, futhi lokho kubonakala sengathi izithiyo ezingenakunqotshwa, kungenzeka ukuthi kusasa kube yinto yokudlala kwengane yakho. Ukulala okuqinile kuyisimo esibalulekile sokuvumelana nezwe kanye nenhlanhla yokuxazulula ngempumelelo izinkinga. Umthandazo wokuza iphupho uphumelela kakhulu uma uzizwa wena uZimu ophakade "Mina". Khona-ke ukungabi nalutho kwezwe kukuyeka ukukukhathaza kakhulu. Izinkinga nezinkinga zokuphila kwansuku zonke bekulokhu zikhona, futhi esikhathini esizayo kuyoba khona abaningi. Ngakho-ke, kungani ukhathazeka ukukhathazeka. Kuzo zonke intando kaNkulunkulu: ngoba kwakunjani nokuthi kuzoba yini. Futhi umthandazo ngaphambi kokulala, ovela enhliziyweni ehlanzekile, kubaluleke ngaphezu kwanoma yikuphi ukukhathazeka emhlabeni. Ingahlanza umphefumulo wakho, ikunike umqondo wokuthula, umusa nomthando.
Umthetho wokuqala we-thermodynamics ukuqala kwakho konke okukhona